Ny Lokan’ny Famahanana Bilaogy Boukary Konaté voalohany tao Mali · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2019 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, polski, Italiano, Ελληνικά, English
Fahatairana sy fahaverezana goavana ho an'ny vondrom-piarahamonina GV ny fahalasanan'ny namana Maliana Boukary Konaté tamin'ny taona 2017. Fahaverezana goavana ho an'ny bilaogera Afrikana, sy ireo namany ary mpanjohy azy ao Mali ihany koa izany. Fantatry ny maro amin'ny maha ‘rain'ny famahanana bilaogy’ azy any amin'ny firenena niaviany i Boukary ary nankasitrahana, notiavina ary tsaroana ao an-toerana ny toetrany mahafinaritra sy malala-tanana, ny fitiavany hitandroana ny kolontsaina Afrikana sy ny fiteny an-tserasera .
Nanapa-kevitra ny hamorona ny Loka Boukary Konaté mba hanomezam-boninahitra ny fahatsiarovana azy ny namany ao amin'ny Doni Blog Mali, fikambanan'ny bilaogera Maliana izay nampiany tamin'ny fananganana azy.
I Moussa Mallé Sissoko no nahazo ny loka voalohany tamin'ny fanehoana ny sarin'ilay mpiangaly mozika Maliana iray jamba. Ho an'i Randane Ould Barka ny loka faharoa, noho ny fandraisany anjara tao amin'ny tanàndehibe rotiky ny ady tao Timbuktu, ary ny fahatelo, ho an'i Alhousseini Dicko, noho ny lahatsorany momba ny vakoka ara-kolotsaina tsy manan-tsahala dia ireo sora-tanana tranainy tany Timbuktu. Navoaka tamin'ny tranokalam-baovaon'olompirenena Maliana, Bembere ireo bilaogera telo .
Nanokana ampahany tamin'ny vaovao amin'ny hariva ho an'ny fifaninanana sy ny fahatsiarovana ilay olo-malaza Maliana tsy afaka ao am-po (lahatsary amin'ny teny Frantsay) ny TM2, fantsom-pahitalavi-pirenena ao Mali.
Ginea-Bisao 5 ora izay
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 7 ora izay